Shankar BC Biography | Hamro Kalakar
Biography last updated: 21st Oct, 2017
Facts of Shankar BC
Actor, Model, Choreographer
Contact Shankar BC
Suggestion for Shankar BC
Shankar BC is Actor, Model, Choreographer. He was born on 11th February in Nepalgunj, Banke. His horoscope is Aquarius. His marital status is Married.
अहिलेका ख्यातीप्राप्त मोडल, नायक, तथा नृत्य निर्देशक हुन शंकर वि.सि । उनी आमा विनु वि.सि र वुवा चिज बहादुर वि.सि को कोखबाट जन्मिएका हुन । उनको जन्म बाँकेको नेपालगंज मनकामनापुर खजुरामा भएको हो । गाउघरमा हुने विवाह, पूजा आजाको क्रममा सानैदेखि नाच्न रमाउँदथे ।सबैले श्ांकरको नाचलाइ प्रशंसा गर्दथे । मनकामनापुरको निरा प्रा.वि मा पाँच कक्षा सम्म अध्ययन गरे । निरा प्रा.वि मा कक्षा दुईमा अध्ययन गर्दा विधालयले डान्स प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो । सोहि क्रममा सोहि विधालयका शिक्षकले पनी नाच्नका लागि आग्रह गरेका थिए तर श्ांकरले मलाइ नाच्न आउदैन , म कहाँ नाच्छु र सर भनेर टारेका थिए र पनी आफ्नो शिक्षकको पटक पटकको आग्रहलाई स्विकार गरेर प्रतियोगितामा भाग लिए र नाचे । उक्त प्रतियोगिताबाट आफूले पुरस्कार पाएको कहिले भुल्दैनन ।
हुर्कदै बढदै गए ,मा.वि तहमा अध्ययन सँगै सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायत जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा पनी सहभागि हुन थाले । जिल्ला तहमा हुने विभिन्न कार्यक्रममा नृत्य प्रतियोगितका लागि माग हुन थाले । उनी विधालयको तर्फवाट नेतृत्व गर्दै जिलला तहमा भाग लिन थाले । विधालयको तर्फवाट नेतृत्व गरेको स्थानमा प्रथम भए । जिल्ला , क्षेत्र सबैतिरबाट हौसला,प्रशंसा बोकेर काठमाण्डौं प्रवेश गरे । वि.सं २०४७ सालमा पहिलो पटक काठमाण्डौं आएर राष्ट्रिय नाचघरको स्टेजमा नाचे । स्कुले जीवन सकिएर उच्च शिक्षाको अध्ययन गर्न लागे तर घरपरिवारबाट सि.एम.ए पढेर डाक्टर बन्नुपर्छ भनेपछि सि.एम.ए अध्ययनका लागि उनी सुर्खेत हानिए । सुर्खेतमा छँदा होस्टलमा बसे तर होस्टलमा बसेर पढन आफूलाई ठुलो धौ भएको अनुभव सुनाउँछन । “ होस्टलमा बसेर पढन साह«ै दिक्क लाग्यो,अनी मैले होस्टल नै छोडेर भाग्ने निर्णय गरें ।”उनी भन्छन “ नेपालगंजमा शत्रु फिल्मको सुटिङ युनिट पुगेको थियो । सुटिङ हेरिसकेपछि अब सुटिङ लाइनमा लाग्छु भनेर सोच आयो । त्यहाँ कमल राइले डान्स सिकाउदै थिए । उनी सम्म पुग्नको लागि केहि त गर्छु भनेर केहि सोचे । वि.स.२०५१ सालमा होस्टलमा छँदाको आफूसँग भएको १२०० रुपैया, तीन जोर कपडा र एउटा कालो व्याग बोकेर काठमाण्डौं प्रवेश गरे ।”
वि.स.२०५१ सालमा काठमाण्डौंमा आफ्नो साथीहरुसँग बस्न थाले ।साथीहरुको आफ्नै पलङ भएकाले साथीहरु पलङमा सुत्दथे भने उनी भुईमा सुत्दथे ।बस्दै ,दिन बित्दै जाँदा एकदिन कामना पत्रिका पढदै गर्दा डान्स सक्नेको लागि मौका भनिएको विज्ञापन देखे र त्यो विज्ञापनलाइ काटेर पर्समा राखे । धेरै दिनको खोजी पछि उक्त डान्स सेन्टर पत्ता लगाए । उक्त डान्स सेन्टर कमल राइको थियो । उनले आफू नेपालगंजबाट आएको कुरा सुनाए । नेपालगंजमा शत्रु फिल्मको सुटिङमा देखे भेटेका कुराहरु सबै सुनाए । डान्स सिक्नकै लागि होस्टलबाट भागेर आएको बेलीविस्तार सुनाए । त्यसपछि डान्सको लागि ट्रायल लिगे । ट्रायल पछि कमल राइले डान्स कक्षाको लागि छनोट गरे । पैसा अभावको कारणले बिहान बिहान टेकुबाट डान्स सिक्न विजुलीवजार सम्म हिडेरै पुग्दथे हिडेरै फर्कन्थे । पछि सथीहरुलाई छोडेर छुट्टै बस्न थाले । एकदिन दुइ दिन सम्म भोकै बसे पैसा अभाबले । यो कुरा थाहापाएपछि उनको डान्स सिक्ने साथी शुरेस पाठकले घरमा लगेर खाना खुवाए । कोहि दिन लामखुट्टेले सताउने ताका लामखुट्टे भाग्ने धपु किन्ने पैसा समेत नभएर राती कागज बालेर लामखुट्टे भगाएर आनन्दले सुतेको दिन पनी भोगेको बताउछन । डान्स सिक्दै जाने क्रममा दुइ महिनापछि नायिका जल शाह डान्स सिक्न कै लागि आए, त्यसपछि शंकर र जल शाह डान्स सिक्ने डान्स पार्टनर भए । डान्स सिक्दै जाने क्रममा कमल सरले एकदिन कोरसमा नाच्न मन छ त भनेर प्रश्न गरेपछि उनले हुन्छ एकदम इच्छा छ भनेर सुनाए र नाचे पनी । यसरी नाच्दै जाने क्रममा सत्तरी भन्दा बढि गीतहरुमा नाचे । उनीसँगै गीतहरुमा कोरस नाच्नेमा दिलिप रायमाझि , शुशिल क्षेत्री , दिनेश अधिकारी हुन्थे । पछि फिल्मसँगै दोहोरी गीतमा अफर आयो । लोक दोहोरीको क्षेत्रमा यस्तो राम्रो नाच्ने मान्छे आए भनेर चारैतिर हल्ला भयो , त्यसपछि एक गर्दै अर्को गीतमा अवसर जुटिरह्यो । पछि आफै निर्देशन पनी गर्न थाले । “सुपारी चाम्रो”, “लालुपाते नुग्यो भुइँतीर”, “नजाउ है सानु पधेंरीमा” जस्ता गीतहरु सुपरहिट बने । दोहोरी सँगसँगै “फस्ट लभ”, “अन्दाज”, “रावण”, “लंका”, “वडा नं ६”, “सुश्री” लगायत थुप्रै फिल्महरुमा कोरियोग्राफि गरे । केहि गीतहरुमा स्वर समेत दिइसकेका शंकर वि.सि. अहिले सवैमाझ परिचित छन ।
उनले आफ्नो स्टेज सो ३० भन्दा बढि राष्ट्रहरुमा देखाइसकेका छन । दोहोरी क्षेत्रका मोडलतर्फका “किङ्ग” भनेर सुपसरचित भएका उनले सय ओटा भन्दा बढि फिल्ममा कोरियोग्राफि गरिसकेका छन । लगभग २००० भन्दा बढि गीतहरुमा अभिनय गरिसकेका छन । २००० भन्दा बढि गीतहरुको आफैले निर्देशन गरिसकेका छन । २३ वर्ष देखि यो क्षेत्रमा लागेका उनी सबैलाई बुझेर राम्रोसँग आउन सुझाव दिन्छन ।
Shankar BC Photo Gallery
Shankar BC Videos
✓ Surendra Kc
✓ Kamal Gaule